“Haddaan wax xiro dad badan baa xabsi gali lahaa” Duqa magaalada Muqdisho – Radio Daljir
“Haddaan wax xiro dad badan baa xabsi gali lahaa” Duqa magaalada Muqdisho
Muqdisho, April 04 – Duqa magaalada Muqdisho ayaa qiray in khasaare badan oo ku dhashay dagaalka ka socda magaalada Muqdisho, waxase uu dhinaca dawladda ka fogeeyay mas\_’uuliyadda isla makraana uu dusha uga tuuray kooxaha dagaalka kula jira. Maxamuud Axmed Tarsan ayaa sidaa Daljir u sheegay isaga oo sidoo kalena ka jawaabay eedayn uu shalay u jeediyay Maxamed Dheere guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir.
Mudane Tarsan waxa uu sheegay in ay dawladdu guulo badan ka gaadhay dagaallada ka socda magaalada Muqdisho, waxana uu sheegay in ay la wareegeen dhul badan oo ka mida magaalada Muqdisho, halka uu sheegay in kooxda Alshababna uu dhulku ku soo yaraanayo. Waxa uu sheegay in ay hadda hayaan dhallinyaro badan oo ka soo baxsaday Alshabab oo ay dhaqan-celin.
Duqa magaalada Muqdisho oo ka hadlayay khasaaraha soo gaara dadka ayaa sheegay in Meel dagaal uu ka socdo aanan caano la isku daadinayn. Waxa uu intaa ku aray in ay ka xunyihiin khasaarahaas, waxase uu mas\_’uuliyadda dusha uga tuuray jihooyinka ka soo horjeeda.
Isaga oo ka jawaabayay eedayan ayuu sheegay in uusan isagu waxba xirirn, balse uu yahay nin adeeg u qabta dadka. Waxa uu sheegay in haddii uu lahaan lahaa awoodda wax lagu xiro uu dad badan xiri lahaa. Waxa intaa ku daray in waddanka uu leeyahay hay\_’ado u qaabilsan arrimaha xabsiyada sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadaha. Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in wixii intaa ka badan la waydiinayo shacabka Muqdisho, isaga oo intaa raaciyay in ay kala yaqaanaan jihada wax disha iyo tan wax qabata.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sheegay in ayan arrintaa wali dhammaan illaa iyo inta laga gaarayo gunta iyo xaqiiqda ciddii laysay dadkii sida nabad-galayada ah ugu dibad-baxayay magaalada Muqdisho.
Maxamed Dheere, guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa isagu sheegay in uu furi doono dacwad ku aaddan dadkii mas\_’uulka ka ahaa xabsigiisa oo uu ka tilmaamay wasiirka arrimaha gudaha iyo duqa magaalada Muqdisho.
Kuuriya Cabdi Xuseen,